कार्लोस गोन : यो शताब्दिकै नाटकीय उम्काइ | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > NEWS > कार्लोस गोन : यो शताब्दिकै नाटकीय उम्काइ
यो कथा दिन प्रतिदिन झन् रमाइलो र बिकराल बन्दै गैरहेको छ। जापान देश अहिले सदमामा परेको छ। कारण हो कार्लोस गोनको जापानबाट सफलता पूर्णको भगाई। निसानका अपमानित पूर्व चिअरम्यान कार्लोस गोन जापानबाट टर्की हुदै भागेर लेबनान पुग्न सफल भएका छन्।
गोन सन् २०१८ देखि निकै ठुलो काण्डमा फसेका थिए। उनलाई निसान कम्पनीको पैसा आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग गरेको र निसानको बार्षिक आम्दानिको रिपोर्टमा फेरबदलगरेको आरोप थियो। धेरै लामो कार्यतालिका पछि गोनको अदालतको ट्रायल २०२०लाई राखिएको थियो।
गोनलाइ पक्राउ गरेको समाचार बाहिरीए लगत नै संचार कर्मी माझ निकै ठुलो तरंग पैदा भएको थियो। निसानलाई डुब्न बाट बचाएर एक बखत हिरो बनेका उनि एक एक भिलेन बन्न पुगे। धेरैले उनलाई आफ्नो गल्तिको सजाए खेप्नु पर्ने भनिरहदा कतिले उ केबल बलिको बोका भएको पनि भने। मानिसहरुले जे सुकै भनेता पनि गोन जापानको निकै ठुलो र जानी मानि अपराधि भएका थिए। उनि यस्ता अपराधि थिएकि जसलाई नजर राख्न भनेर धेरै मानिसहरु लाई खटाइएको थियो।
यति धेरै मानिसको निगरानीको बिचमा गोन भाग्न सफल भएको घटनानिकै आस्चर्यपूर्ण र रहस्यमय छ। गोनले यत्रो योजना कसरि सफलता पुर्बक गर्न सके ? गोन २४ औ घण्टानै क्यामेराको निगरानीमा रहन्थे। उनि माथि जापानी अधिकारिहरुको निगरानी सबै दिन रहने गर्दथियो। तर पनि उनको यो भगाईले यो शताब्दीकै ठुलो ईस्केप जसरि हेर्न थालिएको छ। १९६३ मा अल्कत्राजमा भएको घटना भन्दा पनि ठुलो।
अनौठो कुरा त के छ भने जापान एक टापुको देश हो। जसको मतलब सहज पूर्ण तरिकाले कोहिपनि यहाँको बोडर आउन सक्दैन। यहि कुराले गर्दा मानिसहरु यो घटनालाई लिएर निकै उत्सुक छन् र आफ्नो दिमागमा उनको योजनालाई केलाई रहेका छन्।
पहिलो रिपोर्टमा गोन बाजाको केस भित्र लुकेर भागेको हुन सक्ने बताइएको थियो। त्यो केसमा उनले घन्टौ बिताएको बताइएको छ जसमा बसेर उनि एरपोर्ट पुगे र त्यहाँ बाट टर्की हुदै लेबनान।
यहि रिपोर्ट अनुसार गोनको टोकियो स्थित घरमा क्रिसमस पार्टीको अवसरमा पाहुनाहरु बोलाइएको थियो। यी पाहुनाहरुलाई मनोरंजन गराउन उनले केहि ब्याण्डहरु बोलाएका थिए। भनिन्छ यहि ब्याण्डले उनलाई भाग्न मद्दत पुर्याएको थियो। उनको यो अपत्यारिलो योजना हलिउडको फिल्म वा नेट्फ़्लिक्सको शो बन्ने खालको भएको मानिसहरु बताउछन।
तर पछिको रिपोर्टले गोन अरुनै तरिकाले भागेको जनाउछ। भनिन्छ उनि सरासर आफ्नो अपार्टमेन्ट बाट निक्लिए र भागे। त्यसो भए २४औ घण्टा निगरानीमा राख्नको लागि प्रयोग गरिएको क्यामेराले किन बताउन सकेन ? क्यामेराको भिडियो महिनामा एक चोटीमात्र छेक गर्ने गरेको पाइएको छ।
यी कुराहरु बाहिरी पश्चात यो पुरै घटना जापानकोलागि निकै लज्जास्पद भएको छ। हुन पनि गोनलाई त्यसरी निगरानीमा राखिदा पनि उनि के गरि यति सजिलै भाग्न सफल भए ?
गोन भाग्न सफल भएको एउटा कारण जापानको नया वर्ष पनि रहेको अनुमान गरिन्छ। नया वर्षको बेला जापानमा धेरै क्रिया कलाप ठप्प हुने गर्दछ। यो कुरा निकै ठुलो लापरवाही रहेको आहिले आएर शाबित भएको छ। नया वर्षको व्यस्ततामा कति सजिलै अधिकारीको आखा छल्न सकिने भनेर पनि यो घटनाली उजागर पारेको छ। जापानी मिडियाले जापानको सुरक्षा निकाय बाट सजिलै भाग्न मिल्ने जस्तो देखाए पनि गोनका वकिलली यो निकै अपत्यारिलो घटना रहेको र धेरै जसो अपराधका सस्पेक्टहरु यस्तो नाटकिय ढंगले भाग्न नसक्ने बताए।
जसो भएता पनि अहिलेलाई भने जापान र पुरा विश्व गोनको अन्तरबार्ताको पर्खाईमा रहेको छ।